मतदान भोलि, के–के गर्न पाइँदैन ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मतदान भोलि, के–के गर्न पाइँदैन ?
कुनै मतदाताले मतदानपछि मतपत्र कसैलाई देखायो भने के हुन्छ ? झुक्किएर पनि त्यसो नगर्नुस् । मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई तत्कालै १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।